Sacuudiga oo Cumrada u furey dadka talaalan iyo kuwa ka bogsday Karoona - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sacuudiga oo Cumrada u furey dadka talaalan iyo kuwa ka bogsday Karoona
Sacuudiag ayaa war ka soo saaray dadka aadaya masjid Xaramka xilliga Ramadaanka ama raba inay soo Cumraystaan. Dadkaas ayaa laga rabaa inay soo qaateen laba talaal ama hal talaal kahor inta ay dalku-galka ka dalban aalada EATMARNA oo iyadu bixinaysa dalku-galka.
Waxa dadka looga digey inay aadaan shabakado kale oo buga. ”Way inay qaateen labada talaal ama hal talaal 14 cisho kahor inta ayna dalban dalku-galka Sacuudiga ama ka bogsadeen Karoona ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay waaxda xajka iyo cumrada.
Talaalka ayaa laga diiwaan gelinaynaa aalad kale oo la yiraa Tawakallna oo aad ka soo degsan karto telfoobkaaga. Waxay kaloo sheegeen in dalku-gal dambe la bixin doonin haddii uu buuxsamaan labada masjid.
Xajka sanadkan iyo dadka ka imaanaya dibedda ayaan welli laga soo saarin xilliga ay furmayaan ayadoo hargabka Karoona uu ku laba kacleeyay Sacuudiga.